पुरुष यौनाङ्ग देख्दा डरलाग्ने अचम्मको समस्या !! - Experience Best News from Nepal
पुरुष यौनाङ्ग देख्दा डरलाग्ने अचम्मको समस्या !!
जसले माथि लेखिएका लक्षणहरुमध्येका थुपै्र लक्षणहरु देखिएर उसको जीवननै खतरामा पर्ने स्थिति पैदा हुन्छ। उत्तेजित लिंगबाट डर लाग्ने अर्को फोबिया मेडोरथोफोबिया (Medorthophobia) पनि हो। यस फोबियामा पनि फोबियाग्रस्त पुरुष वा महलिालाई उत्तेजित लिंग देख्दा, त्यसबारे कल्पना मात्रै आउँदा वा पुरुषको हकमा आफ्नै लिंग उत्तेजित हुँदा पनि अत्यन्तै डर लागेर आउने गर्छ। पुरुषले आफ्नो लिंग उत्तेजित हुँदा त्यसले महिलाहरुलाई गलत सन्देश संप्रेषित भइरहेका छ भन्ने कल्पनाबोधले भयभीत बन्न पुग्छन्। महिलाहरु चाहिँ आफूले देख्ने नहुने कुरा देखियो भन्ने कुराले अत्यन्तै भयग्रस्त बन्न पुग्छन्।
विशेष गरेर जे वस्तुसँग डर लागेको हो, त्यसैसँग साक्षात्कार गराएर त्यसप्रतिको डरलाई विस्तापित गर्ने हिप्नोथेरापीको यो माध्यमबाट मानिसमा जरो गाडेको फोबियालाई कम गर्न र हटाउन सकिन्छ।
यो भनेको साइकोथेरापीकै एक हिस्सा हो, जसमा उसको चेतना मष्तिष्कबाट लुकेको डर, चिन्ता, अनुभूति र स्मरणहरुलाई निश्कासन गर्ने काम गरिन्छ। यसअन्तर्गत पनि सुझाव थेरापी र विश्लेषण पर्दछ। सुझाव थेरापी अन्तर्गत पीडितलाई सुझावहरु सुन्न सक्ने बनाइन्छ। फलतः फोबियाले आक्रमण गरेको बेलामा पनि त्यो व्यक्तिले आफ्नो वरिपरिका व्यक्ति वा उपचारकले भनेका कुराहरु सुन्न र ग्रहण गर्न सक्ने हुन्छन्।
त्यसै गरी विश्लेषण थेरापी अन्तर्गत चाहिँ सामान्य भए अवस्थामा पीडित व्यक्तिसँग छलफल, सरसल्लाह र अन्तर्क्रिया गरेर फोबियाको जड कारणहरु विश्लेषण गर्ने र पत्ता लगाउने कोशिश गरिन्छ। त्यसरी फोबियाका जड कारण पत्ता लागेपछि त्यसअनुसार त्यसको समुचित उपचार पनि गर्ने गरिन्छ।